धनुषाका एकै परिवारका सातजना सम्पर्कविहिन तारा एयरको जहाजमा रहेको पुष्टी! - Hamro Janakpur
धनुषाका एकै परिवारका सातजना सम्पर्कविहिन तारा एयरको जहाजमा रहेको पुष्टी!
२०७९ जेष्ठ १६, सोमबार ०७:२२
हाम्रो जनकपुर ,संवाददाता । आइतबार विहान सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमानमा धनुषाका एकै परिवारको सातजना रहेको पुष्टि भएको छ ।
पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको जहाज १० बजेर ७ मिनेटदेखि सम्पर्कविहिन बनेको थियो । तारा एयरका अनुसार उक्त विमानमा चालकदलका तीन सदस्यसहित २२ जना यात्रुहरू सवार रहेका थिए । त्यसमध्ये धनुषाको मिथिला नगरपालिका–११ लोटा गाउँका सातजना रहेको पुष्टी भएको छ ।
विमानमा राजन कुमार गोले, उनका बुवा इन्द्रबहादुर गोले, आमा राममाया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसादेवी तामाङ, मामा मकरबहादुर तामाङ र माइजु सुकुमाया तामाङ रहेको परिवारजनले पुष्टि गरेका हुन् । उनीहरु मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमानबाट जोमसोम जाँदै थिए । विमान वेपत्ता भएको खबरले परिवारमा रुवावासी चलेको छ । गाउँमा चिन्ता छाएको छ ।
सम्पर्कविहीन भएको जहाजमा १३ नेपाली, ४ भारतीय, २ जर्मन नागरिक र चालकदलका तीन सदस्यसहित २२ जना सवार छन् ।